रिब्रान्डिङ: परिवर्तनलाई कसरी अँगालेर तपाईंको कम्पनीको ब्रान्ड बढ्नेछ | Martech Zone
यो भन्न बिना जान्छ कि पुन: ब्रान्डिङले व्यवसायको लागि ठूलो सकारात्मक परिणामहरू उत्पादन गर्न सक्छ। र तपाईलाई थाहा छ कि यो सत्य हो जब ब्रान्डहरू सिर्जना गर्न विशेषज्ञ कम्पनीहरू नै पुन: ब्रान्ड गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्।
लगभग 58% एजेन्सीहरूले COVID महामारी मार्फत घातीय वृद्धिलाई बढावा दिने तरिकाको रूपमा पुन: ब्रान्डिङ गर्दैछन्।
विज्ञापन एजेन्सी व्यापार संघ
हामी मा Lemon.io रिब्रान्डिङ र लगातार ब्रान्ड प्रतिनिधित्वले तपाइँलाई तपाइँको प्रतिस्पर्धा भन्दा अगाडि राख्न सक्छ भनेर आफैले अनुभव गरेको छ। यद्यपि, हामीले यो कठिन तरिका पनि सिक्यौं कि रिब्रान्डिङ जत्तिकै सरल लाग्न सक्छ, यो नयाँ लोगो विकास गर्नु वा नयाँ नाम प्राप्त गर्नु मात्र होइन। यसको सट्टा, यो नयाँ पहिचान सिर्जना गर्ने र कायम राख्ने निरन्तर प्रक्रिया हो - निरन्तर रूपमा सन्देश पठाउने जुन तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूलाई तपाईंको ब्रान्डसँग सम्बद्ध गर्न चाहनुहुन्छ।
सबै प्लेटफर्महरूमा राम्रो ब्रान्डले संगठनको राजस्व २३ प्रतिशतसम्म बढाउँछ।
लुसिडप्रेस, ब्रान्ड स्थिरताको राज्य
र यो केवल केहि उल्लेख गर्न को लागी हो। यस छोटो र बिन्दुमा लेखमा, हामी तपाईंलाई पुन: ब्रान्डिङ प्रक्रियाको माध्यमबाट हिंड्नेछौं, सुझावहरू साझा गर्नेछौं, सामान्य समस्याहरू प्रकट गर्नेछौं, र तिनीहरूलाई कसरी चकित पार्ने भनेर देखाउनेछौं।
Lemon.io रिब्रान्ड स्टोरी
ठोस पहिलो छाप बनाउन यसले7सेकेन्ड मात्र लिन्छ।
यसको मतलब सात सेकेन्डहरू तपाईले तपाइँको प्रतिस्पर्धामा तपाइँलाई छनौट गर्न सम्भावित ग्राहकलाई मनाउनको लागी हुन सक्छ। यद्यपि यो आफैमा बाधा हो, ग्राहकहरूलाई निरन्तर रूपमा तपाईलाई रोज्नको लागि मनाउन अझ गाह्रो छ। यो अनुभूतिले हामीलाई आजको सफलतामा पुर्‍यायो।
मलाई संक्षिप्त रूपमा lemon.io को इतिहासमा तपाइँलाई बताउन दिनुहोस्।
Lemon.io प्रारम्भिक रूपमा 2015 मा विकसित भएको थियो जब संस्थापक (अलेक्जेन्डर भोलोडार्स्की) ले फ्रीलान्सर भर्ती गर्ने स्थानमा एउटा खाडल पहिचान गरे। त्यस समयमा, ब्रान्डिङ हाम्रो दिमागमा अन्तिम कुरा थियो। धेरै नयाँ व्यवसायहरू जस्तै, हामीले हाम्रो यात्राको सुरुमा गल्तीहरू गर्यौं, जसमध्ये एउटाले आफूलाई "कोडिङ निन्जास" नाम दिनु थियो। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो ठीक समयमा सुनियो किनभने यो ट्रेंडी थियो, र हामीले हाम्रो धेरैजसो फोकस सामग्री निर्माणमा राखेका थियौं।
यद्यपि, हामीले एक असभ्य जागरण पायौं जब हामीले पत्ता लगायौं कि व्यवसायको बृद्धि सुस्त भएको छ र सामग्री मात्र हाम्रो व्यवसायको सफलताको लागि पर्याप्त छैन। हामीलाई उच्च प्रतिस्पर्धी फ्रीलान्स भर्ती संसारमा बनाउनको लागि त्यो भन्दा धेरै आवश्यक थियो। यो हाम्रो रिब्रान्डिङ कथा सुरु भयो।
हामीले हाम्रो रिब्रान्डिङ यात्रामा सिकेका धेरै रोमाञ्चक पाठहरू छन्, र हामी आशा गर्छौं कि हामीले हाम्रो कथा सुनाउँदा, तपाईंले आफ्नो ब्रान्डलाई फाइदा हुने केही कुराहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ।
किन एक रिब्रान्ड आवश्यक थियो
हामीले किन रिब्रान्ड गर्नुपर्‍यो र यसको महत्त्व के थियो भनेर तपाईं सोचिरहनुभएको होला।
ठिक छ, हामी निन्जा र रकस्टारहरूको युगलाई पार गरिसकेका छौं र भारतको एउटा प्रोग्रामिङ स्कूलसँग एउटा आदिम-ध्वनि नाम साझा गरेका छौं, हामीले यो पनि महसुस गर्यौं कि हामी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र बजारमा बाँच्नको लागि सक्रिय हुन आवश्यक छ। परीक्षण गरिएको फ्रीलान्स मार्केटप्लेसहरूको आला यति भीडभाड छ कि बाहिर खडा हुने एक मात्र तरिका बलियो र तारकीय ब्रान्ड हुनु हो।
प्रारम्भमा, हामीले हाम्रो डिजाइनको कारणले गर्दा हाम्रो असफलता हो भनी विश्वास गर्‍यौं, र हामीले एक डिजाइनरलाई सम्पर्क गर्न हाम्रो खुट्टामा छिट्टै थियौं र उहाँलाई ब्लगलाई पुन: डिजाइन गर्न आग्रह गर्नुभयो, जसलाई उहाँले विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गर्नुभयो र कुल पुन: ब्रान्डिङ सुझाव दिनुभयो। त्यो कफिनमा अन्तिम कील थियो, र यो त्यही बिन्दुमा थियो, रिब्रान्डको आवश्यकता स्पष्ट भयो। वास्तवमा, हामीले महसुस गर्यौं कि हामीसँग कुनै ब्रान्ड छैन, र जस्तै, हामीले एउटा सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यो हामीले संस्थाको रूपमा गरेको सबैभन्दा साहसी र सबैभन्दा इनामदायी निर्णयहरू मध्ये एक रहन्छ।
Lemon.io बाट सिक्दै
हामीले कसरी पुन: ब्रान्डिङ प्रक्रिया पूरा गर्यौं भन्ने कुराको चरण-दर-चरण स्निपेट यहाँ छ। हाम्रा दिशानिर्देशहरू पूर्ण छैनन्; यद्यपि, हामी हाम्रो अनुभवबाट जानकारीको साथ सकेसम्म उदार हुनेछौं। हामीले अनुसरण गरेका चरणहरूको सारांश यहाँ छ:
हामीले एक ब्रान्ड व्यक्तित्व र एक ब्रान्ड मस्कट सिर्जना गर्यौं - दुई बीचको सम्बन्ध यस्तो छ: तपाईंको ब्रान्ड व्यक्तित्व तपाईंको कथाको मुख्य पात्र हो, जसले आफ्नो लक्ष्यको बाटोमा अवरोधहरू सामना गर्नेछ। एक ब्रान्ड मस्कट एक हो जसले तिनीहरूलाई सबै कठिनाइहरू पार गर्न र अन्ततः उनीहरूको लक्ष्यमा पुग्न मद्दत गर्दछ। संक्षेपमा, ब्रान्ड व्यक्तित्वले हाम्रो लक्षित दर्शक वा ग्राहकहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, र मस्कटले हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जसको लक्ष्य उनीहरूको समस्या समाधान गर्नु हो।
हामीले ब्रान्ड पर्सोनाको खरिद निर्णय (BPBD) नक्सा लिएर आएका छौं - एक BPBD नक्सा कारणहरूको सूची हो जसले हाम्रा लक्षित श्रोताहरूलाई हामीबाट केहि किन्न बाध्य तुल्याउँछ र उनीहरूलाई नगर्ने कारणहरू पनि। यसले हामीलाई हाम्रो ब्रान्ड व्यक्तित्वको खरीद निर्णयहरू बुझ्न मद्दत गर्‍यो र कुन व्यवहारले उनीहरूलाई रोक्न सक्छ भनेर जान्न मद्दत गर्‍यो। हाम्रो लक्षित दर्शकहरूले हामीबाट किन किन्ने वा किन नगर्ने कारणहरू सूचीबद्ध गर्ने प्रक्रिया समावेश छ।
एक ब्रान्ड सार म्याट्रिक्स - यो हाम्रो ब्रान्डको एलिभेटर पिच थियो जसले हाम्रो व्यवसायको अस्तित्वको सबै कारणहरू र कसरीहरूलाई लेखेको थियो। यसले हाम्रो व्यवसायले के गर्छ देखाउँछ र हाम्रो ब्रान्ड मानहरू सञ्चार गर्छ।
ब्रान्ड कहानी - ब्रान्ड कथाले हामीलाई सबैभन्दा उपयुक्त नामकरणमा डोऱ्‍यायो, जुन हामीले अन्ततः अपनायौं।
Lemon.io रिब्रान्डिङ परिणामहरू
रिब्रान्डिङका अमूर्त फाइदाहरू समावेश छन् कि यसले हामीलाई आत्मविश्वास, प्रेरणा, अर्थ र उद्देश्यको भावना ल्यायो, लीडहरूको ईर्ष्याजनक प्रवाहलाई उल्लेख नगर्न।
र, निस्सन्देह, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो तल्लो रेखामा पुन: ब्रान्डिङले गरेको प्रभाव हो। यो अभिव्यक्त गर्ने उत्तम तरिका आंकडाहरू मार्फत हो किनभने संख्याहरू झूट बोल्दैनन्।
नतिजाहरू उत्कृष्ट थिए र हामीले हाम्रो Lemon.io ब्रान्ड सुरु गरेको दस महिना भित्र विगत पाँच वर्षमा प्राप्त कुल ट्राफिक बेन्चमार्कको लगभग 60% पुग्ने देख्यौं।
पूर्ण रिब्रान्डले हामीलाई हाम्रो उत्कृष्ट महिनामा औसतमा 4K आगन्तुकहरूबाट 20K मा सरेको देख्यो। हामीले5मा 10M GMV को लागि ट्र्याकमा राख्दै हाम्रा आगन्तुकहरू र बिक्रीको 2021 गुणा उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गरेका छौं। यस वृद्धिको यी ग्राफिकल प्रतिनिधित्वहरू जाँच गर्नुहोस्:
अघि: कोडिङ निन्जास ट्राफिक कम्पनीको सुरुदेखि र पुन: ब्रान्डिङ सम्म:
पछि: रिब्रान्डिङको नौ महिना भित्रमा भएको प्रगति।
यदि तपाईं स्टार्टअप हुनुहुन्छ भने (Lemon.io अनुभवमा आधारित) तपाईंले कहिले रिब्रान्ड गर्नुपर्छ?
समय भनेको सबै कुरा हो। पुन: ब्रान्डिङ गर्न धेरै कामको आवश्यकता छ र धेरै स्रोतहरू खपत गर्दछ, र यो गणना निर्णयहरू गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
रिब्रान्डिङको लागि उपयुक्त समय कहिले हो?
Lemon.io मा, हामीलाई थाहा थियो कि यो हाम्रो संगठनको कर्पोरेट छवि परिवर्तन गर्ने समय हो जब:
कामै भएन ! रिब्रान्डिङको लागि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो औचित्य हाम्रो हालको ब्रान्डले इच्छित परिणामहरू ल्याइरहेको छैन भन्ने महसुस गर्नु थियो। हाम्रो मामलामा, यो सीमित ट्राफिक थियो जुन हामीले "कोडिङ निन्जास" अन्तर्गत प्राप्त गरिरहेका थियौं। हामीले हाम्रो सामग्री सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने विश्वास गर्‍यौं जबसम्म हामीले अन्ततः हामी बजारमा अशुद्ध रूपमा स्थानमा छौं भन्ने महसुस गर्दैनौं, र हामीले बाहिर खडा हुन पुन: ब्रान्ड गर्न आवश्यक छ।
हाम्रो व्यवसायमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू थिए - कम्पनीहरू निरन्तर विकसित हुन्छन्। यदि तपाइँको व्यवसाय परिवर्तन हुन्छ वा तपाइँले तपाइँको मनपर्ने ब्रान्ड जनसांख्यिकीय राम्रो-ट्यून गर्नुभयो र यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा ट्याप गर्न चाहनुहुन्छ भने, पुन: ब्रान्डिङ एक विकल्प हुन सक्छ। Lemon.io मा स्विच गर्नु अघि, हामीले अन्य ठोस ब्रान्ड र ग्राहक व्यक्तित्वहरू काम गर्यौं, जसले अन्ततः हामीलाई राम्रो छनोट गर्न र सही स्थानहरू हिट गर्न मद्दत गर्‍यो।
हामी धेरै चर्चित हुनु अघि - हामी अघिल्लो नाम अन्तर्गत प्रसिद्ध हुनु अघि हामीले रिब्रान्डिङको विशेषाधिकार पाएका थियौं। हामी यस तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौं कि रिब्रान्डिङसँग सम्बन्धित जोखिमहरू प्रसिद्धिमा वृद्धिसँगै बढ्छन्। तपाईंले पहिचान गर्नु अघि, जोखिमहरू कम छन् किनभने मानिसहरूले सायद ध्यान दिनेछन्।
हामीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन थियो - रिब्रान्डिङ संसाधन-गहन हो, त्यसैले यो आदर्श हुन्छ जब तपाईंसँग पहिले नै एउटा व्यवसाय छ जसले तपाईंलाई पुन: ब्रान्डिङ प्रक्रिया सुरु गर्न पर्याप्त स्रोतहरू कमाएको छ।
रिब्रान्डिङको लागि यो सही समय कहिले होइन?
ठोस कारण बिना रिब्रान्डिङ कहिल्यै गर्नु हुँदैन। तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँको पुन: ब्रान्डिङ को लागी प्रेरणा गलत छ जब यो तथ्यहरु को सट्टा भावनाहरु बाट उत्पन्न हुन्छ।
लोगो डिजाइन संग बोर? रिब्रान्डिङको लागि बोरियत एक भयानक कारण हो। केवल किनभने तपाईंले लोगोलाई पर्याप्त आकर्षक फेला पार्नुहुन्न यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। लागत लाभको लायक छैन।
जब तपाईंको संगठनमा केहि परिवर्तन भएको छैन - यदि तपाईंको संगठनमा कुनै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू छैनन् भने, पुन: ब्रान्डिङ व्यर्थ छ। पहिले नै कार्यात्मक प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन।
केवल किनभने तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू पनि पुन: ब्रान्डिङ गर्दैछन् - भीड संग जानु आवश्यक छैन। तपाईंको पुन: ब्रान्डिङ निर्णय तपाईंको व्यक्तिगत आवश्यकताहरू र तपाईंको दीर्घकालीन लक्ष्यहरू र समग्र अवधारणाको बुझाइमा आधारित हुनुपर्छ।
तपाईंको व्यवसायको लागि भविष्यको लगानीको रूपमा पुन: ब्रान्डिङ
यो एक विवादास्पद तथ्य हो कि नवीकरण प्रक्रियाको क्रममा समय र स्रोतहरूको गम्भीर खर्चको बावजुद, पुन: ब्रान्डिङ सधैं भविष्यमा लगानी हो। अन्त्यले प्रक्रियामा संलग्न सबै हस्टलहरूलाई औचित्य दिन्छ। हामीले पहिले चित्रण गरेझैं, संख्याहरूले हामीले पुन: ब्रान्ड गरेपछि बिक्रीमा उल्लेखनीय वृद्धिलाई संकेत गर्दछ। प्रक्रिया हाम्रो तल्लो रेखा र हाम्रो कर्पोरेट छवि दुवैको लागि दयालु थियो।
सक्षम रिब्रान्डिङले कम्पनीको समग्र प्रभावकारिता बढाउँछ, स्पष्ट स्थिति, नयाँ बजार र गतिविधिका क्षेत्रहरूको विकासलाई बढावा दिन्छ।
ब्रान्डिङ वा पुन: ब्रान्डिङको प्रक्रिया हाम्रो कथाबाट लाग्ने भन्दा धेरै उच्च र न्यूनहरू द्वारा विशेषता एक धेरै कर लगाउने कार्य हो। यसलाई सही बनाउनको लागि विवेकपूर्ण योजना, सही समय, र पर्याप्त स्रोतहरू लिन्छ र एक ब्रान्ड सिर्जना गर्नुहोस् जसले वास्तवमा कथन बनाउँदछ, तपाईंको आय सुधार गर्दछ र तपाईंको सार्वजनिक छवि सुधार गर्दछ। पुन: ब्रान्डिङ भनेको समयको साथमा रहनको लागि सुधार गर्नु हो।
टैग: विज्ञापन एजेन्सी व्यापार संघबीपीबीडीब्रान्डब्रान्ड मस्कटब्रान्ड व्यक्तिको खरीद निर्णयlemon.ioलुसिप्रेसrebranding
डिजिटल मार्केटिङमा 5+ वर्षको साथ, युलिया ड्राइभ गर्दैछिन् Lemon.ioउनको स्पट-अन लेखन र स्पष्ट सन्देशहरूको साथ वृद्धि। एक लेखक र हृदयमा एक शोधकर्ता, युलियाले पाठकहरूसँग कसरी संलग्न हुने र एउटा कथा निर्माण गर्ने भनेर बुझ्छिन्। युलियाले विगत केही वर्षहरूमा फिनटेक, स्टार्टअपहरू, र सामग्री मार्केटिङको संसारलाई आफ्नो सीपहरूद्वारा पुन: आकार दिँदै 1500+ भन्दा बढी टुक्राहरू लेखेका छन्।